Magetsi anopinda chikamu chemotokari yemagetsi | Ehupfumi Zvemari
Chimwe chinhu chitsva icho makambani akanyorwa pamisika yenyika yenyika iri kuratidza ndechekuti vapinda mumusika uri kubuda wemotokari dzemagetsi. Chinhu chinogona kuvapa iwo akawedzera kukosha mukukoshesa kwemitengo yavo, kunyangwe yakawanda iri pakati nepakati uye yakareba uye zvakanyanya kupfuura munguva pfupi. Mamwe emakambani aya afunga kukwikwidza akananga kumota dzakasvibira ari Endesa naIberdrola, kunyangwe ivo vasati vaisa zano iri mumabhizinesi avo mitsara. Chero zvazvingava, chichava chinhu chekutarisa mumakore anotevera.
Magetsi emagetsi ari kumisikidza mamodheru mumigwagwa yeSpain zvishoma nezvishoma uye pasina fanfare yakawanda. Kusvika padanho rekuti yatove yakawanda kana kushomeka kujairika sangana nemotokari yeaya akasarudzika hunhu mumaguta makuru enyika yedu. Mupfungwa iyi, isu tinofanirwa kuyeuka kuti mota dzemagetsi dzatova chokwadi chinofanirwa kuverengerwa nzendo dzedu muguta. Pamusoro pekupa rubatsiro runoshanda kwazvo kurwisa kusvibiswa kwepasi nekusave mota dzine hukasha.
Panguva ino, kunyoreswa kwe motokari mota dzemagetsi (mota, quadricycle, mota dzekutengesa uye dzeindasitiri nemabhazi) kuSpain asvika huwandu hwakawanda kupfuura Zviyero chiuru muna Chikunguru, zvinoenderana nedhata rakapihwa neSpanish Association yeMotokari neMarori Vagadziri. Mune izvo zviri pachena kuti kwave nekuwedzera mune ino yega nzira yekutakura inopfuura 50% kana ichienzaniswa nenguva imwecheteyo gore rapfuura. Pakati paNdira naJuly wegore rino, musika weSpanish wemotokari dzakauchikwa wakamira pazvikamu makumi mana nemazana mashanu nemakumi matatu neshanu,
1 Makambani emagetsi akakwenenzverwa
2 Magetsi emagetsi anodhura
3 Mazana maviri ekuchaja mapoinzi akaiswa
4 Kutakura sei?
5 Takatarisana nekukwira kwemutengo wemafuta
6 Discount pakutenga
Makambani emagetsi akakwenenzverwa
Imwe yekambani dzichangoburwa kujoina ino yekutyaira ndeye Endesa, iyo yakafunga kubheja zvine simba pamotokari dzemagetsi senzira yekuwedzera mutsara webhizinesi mukati mechikamu. MuSpain mese, 274 Endesa vashandi vakapinda mu Kufamba Chirongwa, iyo inomiririra zvikamu zvinomwe kubva muzana zvekutengesa kwemusika wese wenyika yemagetsi ekufambisa mota. Kune rimwe divi, zvikepe zviri murudzi urwu rwemota dzakasarudzika zvinotarisirwa kuratidza kukura kukuru senge kwegore rinouya. Chinhu chingakanganisa purofiti yekambani.
Nekudaro, kana izvo zvauri kuda kuti unyatso kushandisa iyi nzira iyo makambani emagetsi ari kuenda nayo, ichave iri nguva yekutanga kuti ive yechokwadi. Hazvishamise kuti zviitiko zveizvi zvinonzi ecological mota idiki kwazvo pa maakaundi ebhizinesi yeakanyorwa. Iwe hauzove nesarudzo kunze kwekumirira, kanenge mamwe mashoma makore, kuti mitengo yavo iratidze mamiriro aya ari kutanga kuisa mukati. Kana iwe uine dosi yakanaka yemoyo murefu kubva zvino zvichienda mberi, unogona kuwana mubairo wako mumakore mashanu, matanhatu kana manomwe kana ukasarudza aya maitiro kuita yako inotevera yekudyara portfolio.
Magetsi emagetsi anodhura
Kubva kuEndesa vanobvuma kuti "kuwana mota yemagetsi kunodhura pane kutenga mota inotsva, uye kunyanya kana vakagadzirwa nebhatiri re lithiamu rakagadzirwa nemaoko". Asi panguva imwechete ivo vanoziva kuti mota yemagetsi inogadzira kuchengetedza kwakakura mukati nepakati nepakati, nekuti mukuwedzera kune kuchengetedza mafuta, mari yekugadzirisa zvishoma kwazvo. Izvi zvinokonzerwa hapana maoiri kana mafuta ekuzora, mabhureki ekupfeka ari mashoma uye pakupedzisira hapana michina yekufambisa. Nezvo, mhedzisiro pane muhombodo yevatyairi iri pakarepo.
Mupfungwa iyi, kuchengetedza simba kunogona kureva avhareji 1,5 euros pamakiromita zana recharging husiku uye nevhareji yekushandisa 15 kWh pamakiromita zana sereferenzi chiyero Kune rimwe divi, hazvigone kukanganwika kuti kune mutengo wemubhadharo semhedzisiro yekubuditsa CO100 mumhepo. Nepo vatyairi veiyi kirasi yemota parizvino vane mafomati akasiyana erubatsiro rweveruzhinji uye rubatsiro runosanganisirwa muzvirongwa zvekusimudzira kufamba kwakasimba.
Mazana maviri ekuchaja mapoinzi akaiswa
Imwe kambani hombe yemagetsi, Iberdrola, iri kuendawo nenzira imwechete iyi yebhizinesi. Iko iro bhizinesi boka rasarudza kubheja pane iyo kufamba kwakasimba kuburikidza nemotokari yemhando idzi. Imwe yemipiro mikuru yemhando iyi yekutyaira ndeyekuti inobvumira kudzikiswa kwezvipingamupinyi zveupfumi nemitemo. Mune chirevo anonongedza kuti "mutemo unoteedzera musimboti we" anosvibisa anobhadhara "uye kufambisa kuiswa kwechaji nzvimbo kunodiwa".
Kuzadzikisa zvinangwa izvi, yakwanisa kuisa network muSpain yese mazana mazana maviri ekuchaja emota dzemagetsi, dzinozivikanwa semachaja emagetsi. Izvi zvinongedzo zvinogoverwa mumigwagwa mikuru nemumakoridho makuru enyika mukuita nezvikamu zvakasiyana mukuitiswa kwayo uye izvo zvichizopera mumwedzi yekupedzisira ya200. ichave yakakamurwa munzira nhatu maererano nekushandisa kwayo: kutsanya, superfast uye ultrafast. Ndiine fungidziro yenguva mavari iyo inozobuda pakati pemaminitsi makumi maviri nemakumi matatu.
Chimwe chinhu chinofanirwa kutarisirwa nevatyairi mukirasi ino yemotokari kubva zvino zvichienda iko kuita kwekuchaja patsva pamagetsi network. Zvakanaka, vashandisi vanozokwanisa kudzoreredza munzvimbo dzino dzekuparadzira magetsi, asiwo kuita geolocation, kuchengetedza uye kubhadhara nenharembozha yavo. Sekureva kwenzvimbo kubva kumakambani ari muchikamu chemagetsi, avhareji mutoro unenge uri pakati mana nemashanu euros makiromita zana ese. Kunyangwe mamwe masosi achifungidzira kuti vanogona kudonha mumakore anouya nekuda kwekugamuchirwa kwayo kukuru pakati pevatyairi veSpanish.
Kune rimwe divi, hazvifanirwe kukanganikwa kuti fungidziro yemakambani aya ndeyekuti mune ramangwana pachave neinenge poindi imwe chete pamakiromita zana. Kana zvirizvo, zvichareva mukuita duplicate yazvino network, kunyangwe ichiripo kuti chionekwe kana chiitiko ichi chiri kuzadzikiswa mumakore anotevera. Nekuti kuiswa kwayo munyika medu kuchiri kusava nechokwadi, zvichipesana nezviri kuitika mune dzimwe nyika dzeEurope, kunyanya dziya dziri kuchamhembe kwekondinendi yakare.
Takatarisana nekukwira kwemutengo wemafuta
Pane misiyano yakati wandei zvine chekuita nemota dzine injini yekutsva. Iyo yakakosha ndeye iyo ine chekuita nekuwedzera kwemutengo wegoridhe nhema. Panguva ino, asvika kubhawa ye $ 80 dhiramu. Nezvinotarisirwa kuti inogona kuramba ichikwira, zvirinani munguva pfupi nepakati. Mupfungwa iyi, fungidziro dzeInternational Energy Agency (IEA) dzakazadzikiswa nekukwana, vachifungidzira kuti mugore ra2020 mitengo yaizokwira kusvika pamadhora makumi masere pombi yemafuta.
Ivhareji yemutengo wepeturu muSpain iri padyo neiyo 1,30 euros pa lita. Nemamiriro ezvinhu aya, hazvishamise kuti zvichave zvichibatsira zvikuru kutenga mota yemagetsi mune dzimwe nzvimbo kupfuura dzimwe. Iko, mimwe mishumo yemakambani inojekesa kuti kuchengetedza kuburikidza nemotokari dzemagetsi kunogona kusvika angangoita 9,5 euros pamakiromita zana. Nekuda kweaya maverengero, evhareji yekudyiwa kwe100 kW paawa murwendo rwemakiromita zana, zvinogona kureva mutengo unofungidzirwa padhuze kusvika mairi euros, zvichienzaniswa neashoma euros matanhatu anopihwa nemota idzi dzakakosha zvakadaro. range.
Imwe bhenefiti iyo mota dzemagetsi dzinopa ndeye yavo yepasi mutengo uchienzaniswa nemotokari dzemoto. Ichi chokwadi chinotorwa nekuti chikamu chakanaka chemasipareti eSpain anofungisisa akateedzana ezvekurudzira kana mabhonasi ekutenga kwayo. Mune zvimwe zvezviitiko zvine kusvika 75% pamitero yako. Nepo kune rimwe divi, kune mamwezve mamwe mabhenefiti, sekuregererwa kwakazara kubva kunyoreswa. Nezve VAT, zvakangofanana neicho chemotokari dzakajairika. Saka chichava chisarudzo chaunofanira kutora zvichibva pane zvimwe zvinosiyana.
Chimwe chinhu chinofanirwa kuongororwa ndechekuti chinotorwa kubva kumapaki emota ari kuoneka kirasi iyi yemota. Kusvika padanho rekuti ivo vakawedzera zvishoma nezvishoma kusvika kumaguta nzvimbo, muzvitoro uye kunyange nzvimbo dzevashanyi. Uye chii chakanyanya kukosha, muchikamu chekuwedzera chemakore mashoma anotevera.
Chekupedzisira, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti kune mamwe maratidziro enzvimbo dzekuchaja mumigwagwa mikuru kuitira kuti vatyairi vagadzire maitiro aya zvakanaka. Kunyangwe chikamu ichi chichiri muchikamu chekuwedzera, zvirinani sekusvika kwenyika yedu. Zvakare mamwe ma recharging nzvimbo akasununguka kune vese vashandisi uye akamutsiridza chikamu ichi. Uye chii chakanyanya kukosha, muchikamu chekuwedzera chemakore mashoma anotevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Negocios » Magetsi anopinda muchikamu chemotokari yemagetsi